अनिद्राको धङ्धङी र आँधीको मनोरम नृत्य | Machhapuchhre News | माछापुच्छ्रे न्युज
अनिद्राको धङ्धङी र आँधीको मनोरम नृत्य
– शिव संकल्प
‘बाथटब’को ह्याङओभर सकिएको छैन ।
हो, ‘बाथटब’को पुनर्जन्म पटक–पटक भइरहन्छ । अर्थात् नाटकको पुनर्जन्म । किनकि प्रत्येक नाटकहरू अघिल्ला नाटकका पुनर्जन्म हुन् । प्रथम हुन् अनि अन्तिम पनि । यो नै चक्र हो । चक्र अर्थात् अनन्तता । अनन्तता अर्थात् पुनरावृत्ति । यो पुनरावृत्ति यसपटक ‘आँधीको मनोरम नृत्य’का रूपमा भयो ।
‘बाथटब’ हेर्न मैले कसैका आँखा सापट लिनु परेको थियो भने ‘आँधीको मनोरम नृत्य’ हेर्दा मसितै बसेका अनिद्रा र निःशब्द शमशेरका गरेर तीनजोर आँखा भए । अनि शिल्पी रंगमञ्चको गोठाले नाटकघरमा उपस्थित अनेक आँखाहरू मेरै आँखा भए । सिरियल किलर र नगरकोटीले भने सुटुक्क अघिल्लै दिन नाटक हेरेछन् । त्यो दिन तिनका आँखा अन्तै छुटिगए ।
त्यो दिन अनिद्रासित मेरो अपोइन्टमेन्ट थियो । नाटक हेर्ने योजना थिएन । शायद अनिद्रालाई भेटेर म फर्किन्थें होला किनकि मलाई टाढा पुग्नु थियो । तर, त्यो दिन मलाई शिल्पी जानु रहेछ । अनिद्राको योजनामा मलाई पनि समाविष्ट हुनु रहेछ । तर, नाटक हेर्नुअघि हामी भेट्यौं । छोटो भेटमा पनि अनेक कुरा गर्न भ्यायौं । त्यही दिन पहिले अनिद्राको स्कुटर बिग्रिएको थियो । अनि त्यसपछि उनको ट्याक्सी भीमसेनगोलाको अनन्त जाममा फसेको थियो । तर, अन्ततः उनी आएकी थिइन् ।
कुरा छन्दको चल्यो अनि जीवनको । प्रेमको अनि पीडाको । कतिपय अति भौतिक लाग्ने र कतिपय अति आध्यात्मिक सुनिने बातसमेत भएछन् ।
“हामी एउटा कम्बाइन एन्थलजी गरम् न !”
“तर, लेट्स् टेक टाइम ।”
“हो जीवनका डेडलाइनहरू हास्यास्पद हुन् ।”
“नो एक्सलरेसन, नो रिटार्डेसन ।”
“जबसम्म कर्म ध्यान हुन्छ, तबसम्म ठीक छ । जब ढकोसला हुन खोज्छ, बेकार !”
“बालककालका अनुभवहरू शक्तिशाली हुन्छन् । हाम्रो आत्मालाई भित्रैसम्म बेरेर राख्न सफल हुन्छन् ती अनुभव !”
हामी बात गर्दै गयौं । मैले उनको छन्द गायनको प्रत्यक्षदर्शी मेरा मित्रहरूले गरेको प्रशंसा पनि सुनाउन भ्याएँ । उनले पनि छन्द गायनमा आफूलाई अलौकिक आनन्द मिल्ने बताइन् ।
“विचरति मृड इह नीरसग्रीष्मे
(कलहान्तरिता अर्थात् बिनाकारण प्रेमीसित रिसाएर बिछोडिएकी नायिकाहरूका लागि अत्यन्त भयानक यस निरस ग्रीष्म ऋतुमा भगवान् शंकर कैलाश शिखरको वारिपारि यसै घुमिरहेका छन् ।)
म गुनगुनाउँदै थिएँ । म मुस्कुराउँदै थिएँ । तर, शायद यसका रचनाकार स्वर्गवासी कविरत्न कृष्णप्रसाद घिमिरेलाई मैले गुनगुनाएको मन परेन । उहाँले महाकवि जयदेवको ‘गीतगोविन्द’को शैलीमा लेख्नुभएको गीतिमहाकाव्य ‘गौरीगिरीशम्’बाट थियो त्यो गीत । ‘गीतगोविन्द’जत्तिकै अद्वितीय । उत्तिकै अद्भूत ।
“यसलाई न्याय गर्न भूषिता वशिष्ठले गाउनुपर्छ,” मैले भनें । शायद मनोयोगपूर्वक उनले यो गाएको दिन म पुनः मुस्कुराउनेछु ।
प्रसंग बदलियो । शास्त्रीय नृत्यमा रस छ । अनि उर्दू कवितामा पनि । उनलाई फैज पढ्नु छ । मलाई अहमद फराजको मुहाशरा अनुवाद गर्नु छ । करिब दुई वर्षदेखि म प्रयासरत छु तर चार पंक्ति पनि चित्त रमाउने गरी बनेको छैन ।
मैले उनलाई अहमद फराजको मुहाशराको शुरुवाती अल्फाज सुनाएँ—
“मेरे गनीम ने मुझ को पयाम भेजा है
कि हल्काजन है मेरे गिर्द लश्करी उस के
फसील ए शहर के हर बुर्ज हर मिनारे पे
कमाँ ब–दश्त सितादा है अश्करी उस के”
(मेरा शत्रुले मलाई सन्देश पठाएका छन् कि मलाई चारैतिरबाट उनका सैनिकले घेरिसकेका छन् । शहरबाहिरको पर्खालका हरेक बुर्जा र मचानमा उनका सैनिकहरू धनु तानेर बसेका छन् ।)
“कडा उर्दू छ यसमा,” म भन्दै थिएँ । यस्तैमा भूषिता अर्थात् अनिद्राको फोन बज्यो । पल्लोपट्टि शायद निःशब्द शमशेर थिए । हामी उठ्यौं ।
नाटक शुरु हुन केही समय बाँकी थियो । हामी शिल्पी छि¥यौं । अनिद्रालाई निःशब्द शमशेरले स्वागत गरे । छेवैमा घिमिरे युवराज थिए । मैले सुस्तरी ‘नमस्ते, म फलानो’ भनें । घिमिरे युवराजले विस्फारित नेत्रले मलाई हेरे ।
“गज्जब, नाटक हेर्न आइदिनुभएकोमा धन्यवाद,” मलाई अँगालो मारेर यसो भन्दै गर्दा उनी औपचारिकभन्दा पनि वास्तविक सुनिएका थिए । कम्तीमा मलाई त्यस्तो लाग्यो । शब्द र चित्रबाट मात्र सम्बन्धित हुनुभन्दा सशरीर भेटिनुको उमंग छुट्टै हुँदो रहेछ ।
हामी नाटकघरभित्र छि¥यौं । केही क्षणमै नाटक शुरु भयो । मञ्चमा शिशुकक्षाका विद्यार्थीहरू चढ्ने बसको दृश्य तयार भयो । युवा कलाकारहरूले गजब प्रभाव पारे । छिनमै ती हुर्के, अल्लि ठूला भए । नाटकको दृश्य बस अनि कक्षाकोठा अनि फेरि कक्षाकोठा अनि बस गर्दै अघि बढ्यो । अल्लि पछि सरकारी कार्यालय र जागिरेको घरसम्म दृश्य स¥यो ।
सीमित साधनहरूमा तयार गरिएको भए पनि सेट प्रभावकारी लाग्यो । बस र कक्षाकोठामा बस्ने आसनका रूपमा, घरको टेबलका रूपमा, स्कुल ब्याग वा शिक्षणपद्धतिको भारको प्रतीकका रूपमा तथा अफिसका फाइलको रूपमा समेत फोल्डिङ स्टुलको प्रयोग गजब थियो । चल्तीका अंग्रेजी गीतमा विद्यार्थीहरूका नाच जमे । प्रिन्सिपलले शिक्षकहरूलाई परिश्रम गराएको प्रतीकात्मक दृश्य पृथक् देखियो ।
सौभाग्य सिंहको प्रिन्सिपलसुलभ कठोरता, सौरभ कट्टेलको विदूषक चरित्रको शिक्षकको भूमिका, आमा र हजुरआमाको स्वरूपकी पवित्रा खड्का र मञ्जु श्रेष्ठको भावभंगिमा उल्लेखनीय थिए । कर्मचारी बनेका कलाकारको परिपक्वता र विद्यार्थी बनेका कलाकारको परिश्रम स्पष्ट झल्किएको थियो भने संगीता उराँव र निस्सिम श्रेष्ठले आ–आफ्नो चरित्रद्वारा विशेष मन जिते ।
बीच–बीचमा छुटेको अनिद्राको उन्मुक्त हाँसोले नाटक हेरेको मजालाई दुगुना गरिरहेका थिए । धन्न नाटक शुरु गर्दा नियम बताउन आएका घिमिरे युवराजले ‘कुरा गर्न पाइँदैन’ भने पनि हाँस्न पाइँदैन भनेका थिएनन् ।
शिशुकक्षाका विद्यार्थीदेखि किशोरावस्थाका विद्यार्थीसम्मका र तिनका शिक्षक तथा अभिभावकका समेत अनुभव र मनोविज्ञानलाई नाटकमा खोतलिए । समाजका पेशाकर्मीमध्ये सरकारी कर्मचारी, शिक्षक तथा प्रिन्सिपल; घरभित्रका परिवारका सदस्यहरूमा आमा, हजुरआमा, बाबु, छोरी तथा छोरा; किशोरावस्थाका तथा वयस्क मित्रलगायतका भिन्न–भिन्न चरित्रहरू नाटकमा मिहिन तरिकाले देखाइए । विद्यालयका शिक्षक र प्रिन्सिपल तथा शिक्षक र विद्यार्थीबीचको सम्बन्ध, किशोरावस्थाको कुलत तथा विपरीतलिंगीप्रतिको आकर्षण, सरकारी कार्यालयको कार्यसंस्कृति, घरपरिवारका विभिन्न पुस्ताका व्यक्तिहरूको रूचिको भिन्नता, घरमा मदिरा सेवन गर्ने÷गराउने प्रचलन, घरकी छोरीप्रति पाहुनाको दुव्र्यवहार, कलिलो उमेरको प्रेम सम्बन्धले ल्याउने परिणामलगायतका समाजका अनेक पक्षका घटनाक्रम र यसले सम्बन्धित पात्रहरूमा पार्ने भौतिक तथा मानसिक प्रभावलगायतका विषयवस्तुसमेत नाटकमा छरितो रूपमा उजागर गरिए ।
१ घण्टा २० मिनेट एक झमटमा बित्यो । नाटक समाप्त भयो । निःशब्द शमशेरले बिस्तारै अघि बढेर मञ्चमा रहेको ‘बाथटब’ निस्कने तहखानालाई नमन गरे, सुमसुम्याए । अनि हामी सबै गएर नाटकमा प्रत्यक्ष संगीत तथा गायन प्रस्तुत गर्ने कलाकारहरूलाई भेट्यौं । मैले स्मारिका फुयाँललाई नमस्कार गरेँ अनि भनें, “यहाँको स्वर साह्रै सुमधुर छ !”
अनि बिस्तारै हामी निस्क्यौँ । दिन रमाइलो बित्यो !
हो, हामी कसैलाई भेट्छौं अनि भेटेपछि ताजा अनुभव गर्छौं, प्रेरित हुन्छौं वा अनन्तमा उडे–उडे जस्तो अनुभव गर्छौं भने यस्तो भेटको गजब आनन्द हुन्छ । अनिद्रासितका हरेक भेट यस्तै हुन्छन् ।
शायद यही नै ‘आँधीसितको मनोरम नृत्य’ हो !
मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले पनि हेल्मेट लगाउनु पर्ने